नेपाल आज | ज्योति मगरले इन्टरभ्युमै वक्षस्थल देखाएर हैरान (भिडियोसहित)
ज्योति मगरले इन्टरभ्युमै वक्षस्थल देखाएर हैरान (भिडियोसहित)
‘मेरो औपचारिक रुपमा बिहे भएको छैन’
शुक्रबार, ०९ असार २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
असार–९ । ‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड’ एक प्रश्नको जवाफमा हट गायिका, मोडल ज्योति मगरले बुझ्न गाह्रो हुने उत्तर दिएकी छन् । तपाईका विवाह भयो ? उनले भनिन्, ‘मेरो सोसियल्ली, अफिसियल्ली चाहिँ विवाह भएको छैन ।’
अर्थात औपचारिक रुपमा बिहे भएको छैन । अनौपचारिक रुपमा चाहिँ भएछ भनेर बुझ्दा सही वा गलत जे पनि हुन सक्छ ।
छोटो कपडा लगाउने ज्योतिलाई गर्मीले त साथ दिएको होलानी हैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘म त जाडोमा पनि छोटै कपडा लगाइदिन्छु ।’
नेपालआजसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा ज्योति मगर ‘स्कर्ट र केज ब्रा’ मा उपस्थित भएकी उनी निकै हट देखिएकी थिइन् । बेला बेला स्कर्टको फित्ता फुस्कन्थ्यो । सजिलै सम्हालिन्थिन् । स्टेजमा ज्योति मगरको क्रेज वास्तवमै देखिने गरेको छ । स्टेजको कुरा निस्केपछि उनले भनिन्, ‘ म आफै पनि ज्योति मगर भनेको स्टेजमा मात्रै महशुस गर्छु । ’
उनी आफैले भनिन् कि उनका धेरै रुप छन् । साथीहरुसँग उनी ननभेज जोक्स पनि सेयर गर्दिरहिछन् । बिन्दास भएर गफिन्छिन् । स्टेजमा ज्याकेट खोलेर क्लिभेज देखिने गरी प्रस्तुती दिनु उनको विशेषता नै हो । तर कपडा खोल्दैमा राम्रो प्रस्तुती नहुने उनी बताउँछिन् । उनले भनिन्‘ मैले ज्याकेट खोल्दा झुम्मिन्छन्, अरुले कपडै खोल्दा भाग्छन् ।’
ज्योतिका धेरै कुरा ‘क्लियर कट’ नै हुन्छन् । दारु चल्छ ? उनको सिधा जवाफ ‘चल्छ’ । हल्लिने गरी खानु भएको छ ? ‘मगरकी छोरी हुँ दारु नै खाएर चाहिँ हल्लिन्न ।’ दारुको बारेमा थप खुल्दै उनले भनिन्, ‘गर्मीमा चिल्ड बियर मन पर्छ । जाडोमा निट ह्वीस्की मन पर्छ । कहिले काहीँ टकिला सट दाम्मी लाग्छ । स्विट वाइन पनि पिउँछु ।’